Ahoana ny fomba fanovana ny lahatsoratra amin'ny fijerena haingana Telegram ao anatin'ny 2 segondra | Androidsis
Ahoana ny fomba fanovana ny lahatsoratra amin'ny fahitana Telegram haingana ao anatin'ny 2 segondra
Amin'ity fampianarana video tsotra azo ampiharina ity, raha azo antsoina hoe manamora ny fihoarany io dia hampianatra aho ny fomba fampifanarahana lahatsoratra amin'ny fijerena Telegram haingana. Topi-maso tsara tarehy izay tena ilaina tokoa ho an'ireo mpampiasa Telegram sy ireo mpanjifa hafa soloina natolotr'ity rindranasan-kafatra mailaka cross-platform manaitra ity.
Araraotina ny fanamorana faran'izay hazavaiko aminao anio amin'ity lahatsoratra ity, hanararaotra manazava ihany koa aho izay rehetra omen'ny fijerin'ny Telegram haingana anay amin'ny resaka configurement anatiny mba hahafahan'ny mpampiasa mankafy tanteraka ny iray amin'ireo fiasa tsara indrindra ananan'i Telegram.
Para ampifanaraho amin'ny fahitana Telegram haingana ny lahatsoratra, Horaisinay mora tahaka ny fakana tahaka ny adiresy tranonkala fotsiny izay tianay hamboarina hizara azy mivantana amin'ny bot izay afaka roa segondra monja dia hanao ny asa ho antsika, ka mitarika fijerena haingana ilay lahatsoratra voadika.
Ny anarana ahafahanao mahita ny bot amin'ny Telegram dia @chotamreaderbot, amin'ny fametrahana an'io alias io ao amin'ny motera fikarohana Telegram fotsiny, dia hiseho ilay bot, izay mila tsindrio fotsiny ny bokotra fanombohana Izany dia mivoaka eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery chat miaraka amin'ny bot.
Ity no fomba mora sy tsotra hanatanterahana an'io lazaiko anao io ampifanaraho amin'ny fijerena haingana Telegram ny lahatsoratra rehetra.
Izay rehetra omen'ny fijerin'ny Telegram haingana anay
Ny fomba fijery fifadian-kanina Telegram dia toy ny karazana maody famakiana haingam-pandeha izay mpizaha tranonkala toa an'i Mozilla Firefox efa ela no ela.
A form of vakio ny atiny navoaka tamin'ny pejy na tranokala nefa tsy mila enta-mavesatra ny tranonkala iray manontolo, ary izany ve no mitranga amin'ny maodim-pamakiana sasany amin'ny tranokala sasany, ohatra ny Firefox, ny lahatsoratra resahina dia hapetraka tanteraka amin'ny efijery an'ny Android misy antsika, miaraka amin'ireo sary farafahakeliny takiana mba hahitana ilay lahatsoratra satria tokony ho izy ary tsy ampiana dokam-barotra na varavarankely mitsingevana izay manelingelina antsika amin'ny tena zava-dehibe, izay tsy inona fa ny famakiana ilay lahatsoratra resahina.
Soa ihany maro ny tranonkala no efa mampifanaraka ny volavolany mba hifanaraka amin'ny fomba fijerin'ny Telegram hainganaAry koa ny pejin-tranonkala toy ny Android Police, raha te hanome ohatra azo ampiharina dia efa namboarina tanteraka ka ny lahatsoratra nozaraina tao amin'ny Telegram dia mifanaraka tanteraka amin'ny fijerin'ny Telegram haingana ary tsy mila mampiasa ny fikafika bot izay nolazaiko tao amin'ny fiandohan'ity lahatsoratra ity. Ao amin'ny Androidsis dia mbola eo am-panatanterahana ny fampifanarahana isika, na dia manantena aza aho fa tsy ho ela dia hampiharina ao amin'ny bilaogy ity fiasa ity.
Ankoatry ny fanolorana aminay io safidy io dia afaka mamaky lahatsoratra iray avy amin'ny tranokala mivantana amin'ny fomba famakiana fa tsy mila miala amin'ny fampiharana Telegram na mpanjifa ampiasainay, ny fijerena haingana ny Telegram dia manome antsika fitaovana mahazatra an'ny mpamaky e rehetra na mpamaky e-book.
Noho izany, manana safidy isika hanova ny ambadiky ny efijery fijerena haingana, miantehitra amin'ny ambadika fotsy izay navadika ho toerana misy anao ary manampy loko effet sepia sy loko mainty hafa izay mety amin'ny famakiana alina na ho an'ireo efijery misy OLED, AMOLED ary ny teknolojia SuperAMOLED.
Azontsika atao ihany koa ny mifidy eo amin'ny karazana endri-tsoratra roa, la roboto izay voafidy amin'ny alàlan'ny default ary ny serif azonay ampiasaina ho an'ny fampiharana anao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny telegram fijerena haingana Telegram.
Safidy farany farany tsy kely indrindra fa ny mifanohitra amin'izay, manana safidy hanova ny haben'ny endritsoratra izahay miisa amin'ny bara iray izay ananantsika refy dimy hafa amin'ny haben'ny endri-tsoratra mba hahafahan'ny tsirairay mampifanaraka ny famakiana ny fomba fijery haingana amin'ny filany vakiteny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba fanovana ny lahatsoratra amin'ny fahitana Telegram haingana ao anatin'ny 2 segondra
Rocco dia hoy izy:
Francisco tena manampy, arahaba
Mamaly an'i Rocco
Nokia 7: ny eo afovoany premium an'ny Nokia vaovao
Ny fandikana voalohany sy ny famaritana ny HTC U11 Plus manaraka